Madagasikara, Etiopia: Varoboba tany lonaka · Global Voices teny Malagasy
Madagasikara, Etiopia: Varoboba tany lonaka	Voadika ny 12 Janoary 2012 11:19 GMT
Zarao: Ny fikambanana “TANY” izay miady hoan'ny fiarovana ny tany any Madagasikara no nanapariaka lisitra mitanisa ireo tany any Madagasikara efa ataon'ny vahiny ampihy mamba [fr]. Mampahanfatatra ny rehetra ry zareo fa na ny varotra na ny fampanofana tany lonaka amin'ny vidiny tsizarizary dia samy tena misy tokoa any Madagasikara (2 euros/m2 any Nosy-Be ohatra) sy any Etiopia [fr] (tany 2,500 km2 mihofa isan-kerinandro 180 euros). Tanisain'ny fikambanana Tany ho fanoharana ny fifanarahana ara-tany nifaovan'ny fanjakana Etiopiana sy ny orinasa International Sannati Agro Farm Entreprises. Izany fifanekena izany dia mamela malalaka ny orinasa Sannati group ho afaka haba tanteraka na amin'ny fampodiana renivola izany na amin'izay entana rehetra aondrany.
Tantaran'ny Afrika Mainty farany 2 andro izaySierra LeoneMpiasan'ny Fahasalamàna Mandihy Ho Fankalazàna Ny Famoahana Ilay Marary Farany Tratry Ny Ebola Tao Sierra Leone
7 andro izayAmerika LatinaTe-Hahita Ny Tanàna Afrikàna Afaka Voalohany Tao Amerika Ve? Mandehàna Ao Meksika
FampandrosoanaFifandraisana iraisam-pirenenaHafanàm-po an-tseraseraMediam-bahoakaToekarena sy FandraharahànaTontolo_iainana